एन्ड्रोइडका लागि इमोजिमिक्स एपीके डाउनलोड [खेल] - लुसो गेमर
एन्ड्रोइडका लागि इमोजिमिक्स एपीके डाउनलोड [खेल]
जनवरी 12, 2022 by जोन स्मिथ
यदि तपाईं इमोजीहरूको प्रशंसक हुनुहुन्छ र प्रायः ती पाठ बक्स भित्र प्रयोग गर्नुहुन्छ। यद्यपि, केही अवस्थामा, प्रयोगकर्ताहरूले पाठ सम्बन्धित भावनाहरू फेला पार्न समस्या अनुभव गर्न सक्छन्। त्यसैले प्रयोगकर्ताको रुचि र मागलाई ध्यानमा राख्दै विकासकर्ताहरूले इमोजिमिक्सलाई संरचित गरेका छन्।
अब गेमिङ एपलाई एकीकृत गर्नाले इमोजी प्रेमीहरूलाई विभिन्न भावनामा आधारित भावनाहरू उत्पन्न गर्न अनुमति दिनेछ। एकीकरण को कुनै पनि तेस्रो-पक्ष सहायता बिना नि: शुल्क। केवल गेमिङ एप इन्स्टल गर्नुहोस् र सित्तैमा अनन्त इमोजीहरूको आनन्द लिनुहोस्।
प्रक्रियालाई सरल र प्रयोगकर्ता मैत्री बनाउनको लागि, विकासकर्ताहरूले लाइभ कस्टमाइजर प्रत्यारोपण गर्छन्। अब लाइभ कस्टमाइजर प्रयोग गरेर, गेमरहरू परिमार्जन गर्न र भावनालाई अझ आकर्षक बनाउन सक्षम छन्। यदि तपाइँ यो नयाँ गेम खेल्न तयार हुनुहुन्छ भने एन्ड्रोइड स्मार्टफोन भित्र इमोजी मिक्स युनिकोड गेमहरू स्थापना गर्नुहोस्।
Emojimix Apk के हो
इमोजिमिक्स गेम पजल सेक्सनमा वर्गीकृत अनलाइन प्लस अफलाइन गेमिङ एप हो। यद्यपि गेमरहरूले आधिकारिक स्रोतहरूबाट गेमिङ एप सजिलैसँग पहुँच गर्न सक्छन्। तैपनि यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा, गेमिङ एप डाउनलोड गर्न पनि पहुँचयोग्य छ।
खेल संरचना को कारण एक सरल प्रदान गर्न को लागी छ 2D गेमि। प्लेटफर्म। जहाँ इमोट प्रेमीहरूले विभिन्न भावनात्मक क्यारेक्टरहरू उत्पन्न गर्न सक्षम छन्। पहिले हामी प्रशंसकहरूको लागि कुनै पनि समान खेल साक्षी गर्न असमर्थ छौं।
जब हामी चाल र प्रविधिहरू खेल्ने बारे कुरा गर्छौं। त्यसपछि यो विशुद्ध रूपमा सरल छ र खेलको सन्दर्भमा कुनै विशेषज्ञ सीप आवश्यक पर्दैन। पुरानो क्लासिक विधि प्रयोग गरेर एन्ड्रोइड स्मार्टफोन भित्र गेमप्ले स्थापना गर्नुहोस्। अब मोबाइल मेनुमा जानुहोस् र गेमप्ले सुरु गर्नुहोस्।
खेलको लागि कुनै दर्ता वा सदस्यता आवश्यक छैन। यद्यपि तेस्रो-पक्ष विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दा स्क्रिनमा देखा पर्न सक्छन्। तर अवस्था उस्तै रहनेमा हामी ढुक्क छैनौं। भर्खरै हामीले इमोजी मिक्स एपीके भित्र केही प्रमुख समस्याहरू देखेका छौं।
विकासकर्ता युनिकोड खेलहरू
प्याकेज नाम com.UnicodeGames.DefaultProject
विकासकर्ताहरूले आगामी दिनहरूमा ती समस्याहरू समाधान गर्ने दाबी गर्छन्। समस्याहरू समाधान गर्नुको अलावा, विशेषज्ञहरूले भित्र केही नयाँ विकल्पहरू र सुविधाहरू इम्बेड गर्ने योजना पनि बनाइरहेका छन्। गेमरहरूले आगामी दिनहरूमा अनुभव गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकल्प प्रत्यक्ष साझेदारी विकल्प हो।
फ्यानहरूले कस्टमाइजर प्रयोग गरेर सजिलैसँग धेरै फरक इमोट क्यारेक्टरहरू उत्पन्न गर्न सक्छन्। तर तिनीहरूलाई पाठ बक्स भित्र ती साझा गर्न अनुमति छैन। त्यसैले विशेषज्ञहरू विशेष प्रत्यक्ष साझेदारी विकल्पमा काम गरिरहेका छन् र छिट्टै पहुँचयोग्य हुनेछन्।
एक पटक विशेष विकल्प गेमप्ले भित्र थपिएको छ। त्यसपछि गेमरहरूलाई विभिन्न प्लेटफर्महरूमा उत्पन्न इमोजी साझेदारी गर्न सक्षम गरिन्छ। खेल र उपयोग खेल को प्रक्रिया सरल छ। पहिले, खेलाडीहरूलाई पात्रहरू छनौट गर्न अनुरोध गरिन्छ।
त्यहाँ प्रमुख तीन चरणहरू थपिएका छन्। पहिलो चरणमा, खेलाडीले क्यारेक्टर चयन गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि विभिन्न वस्तुहरू जस्तै चश्मा वा भावनाहरू थप्नुहोस्। अन्तिम खण्डमा, खेलाडीहरूलाई इमोजीलाई हास्यास्पद वा अरू केही बनाउन अनियमित वस्तुहरू थप्न अनुरोध गरिन्छ।
हामी आशा गर्छौं कि खेलाडीहरूले यो हास्यास्पद प्रक्रियाको आनन्द लिनेछन्। यद्यपि फ्यानहरूले गेमिङ एप्लिकेसनबाट थप अपेक्षा गरिरहेका छन् र विकासकर्ताहरूले ती सुधारहरूमा नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्। त्यसैले तपाईं यस नयाँ गेमिङ प्लेटफर्मको मजा लिन तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि इमोजिमिक्स डाउनलोड स्थापना गर्नुहोस्।
खेललाई एकीकृत गर्नाले इमोजी उत्पादन प्रदान गर्दछ।
लाइभ कस्टमाइजर थपिएको छ।
यसले खेलाडीहरूलाई विभिन्न भावनाहरू सिर्जना गर्न रमाईलो गर्न अनुमति दिन्छ।
ती दुखी, खुसी, हास्यास्पद र अधिक समावेश छन्।
खेल इन्टरफेस सरल राखिएको छ।
Emojimix Apk कसरी डाउनलोड गर्ने
हाल गेमिङ एप प्ले स्टोरबाट पहुँच गर्न सकिने छ। तर केही प्रमुख मुद्दाहरू र कडा प्रतिबन्धहरूको कारणले, धेरै गेमरहरू Apk फाइल पहुँच गर्न असमर्थ छन्। त्यसोभए यस्तो अवस्थामा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले के गर्नुपर्छ?
यसैले तपाईं भ्रमित हुनुहुन्छ र उत्तम वैकल्पिक स्रोत खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी प्रशंसकहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् र गेमिङ एपको नवीनतम संस्करण सजिलै डाउनलोड गर्न सिफारिस गर्छौं। अनावश्यक अनुमतिहरू अनुमति बिना नि: शुल्क।
वास्तवमा हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका गेमिङ एप विशुद्ध मौलिक छ। यसलाई डाउनलोड सेक्सन भित्र प्रस्ताव गर्नु अघि पनि, हामी विभिन्न स्मार्टफोनहरूमा खेल स्थापना गर्छौं। खेल स्थापना गरेपछि हामीले भित्र कुनै गम्भीर समस्या फेला पारेनौं।
यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा हामीले पहिले नै धेरै अन्य पजल सम्बन्धित गेमिङ एपहरू प्रकाशित गरिसकेका छौं। जुन खेलको हिसाबले राम्रो हो । ती अन्य सम्बन्धित खेलहरू अन्वेषण गर्न कृपया निम्न खेलहरू स्थापना गर्नुहोस्। तिनीहरु टिनी प्लानेट ब्लास्ट एपीके र Gacha Star Apk.
त्यसैले तपाइँ खेल खेल्न मन पराउनुहुन्छ र विभिन्न वस्तुहरू मिलाएर धेरै इमोजीहरू उत्पन्न गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसपछि इमोजिमिक्स गेमको अद्यावधिक संस्करण पहुँच गर्नुहोस्। त्यो यहाँबाट डाउनलोड र स्थापना गर्न निःशुल्क छ। प्रदान गरिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र सजिलै संग नि: शुल्क मूल गेमप्ले डाउनलोड गर्नुहोस्।
विभाग पहेली, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, इमोजी मिक्स एपीके, इमोजिमिक्स, इमोजिमिक्स एपीके, इमोजिमिक्स गेम मेल अन्वेषण
एशियाफ्लिक्स एपीके २०२२ एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [ड्रामाहरू]
नदेखेको अनलाइन एपीके डाउनलोड २०२२ एन्ड्रोइडका लागि [नयाँ]
1 विचार "Emojimix Apk Download For Android [Game]"
मार्च 3, 2022 1 मा: 26 हूँ
साँच्चै रोचक पोस्ट! थम्ब्स अप।